A ọma oge a mgbasa ozi ọkpụkpọ kwesịrị izute ọtụtụ chọrọ, dị ka na-akwado a dịgasị iche iche nke formats, na-enwe ọrụ na onye-enyi na enyi na kensinammuo interface na inwe ike embed na-egwu ndepụta okwu. The ọzọ sobtaitel customizing nhọrọ ha nwere, mma; ọzọ kpọrọ mma a na-akpaghị aka na-achọ ndepụta okwu online. The media Player depụtara n'okpuru ime na ọtụtụ ndị choro n'elu na ha niile bụ ndị for free.
Wondershare Bụ otu ibé software akpọ dị iche iche media faịlụ formats; dị ka isi uru, ọ bụ fechaa na mfe iji. Ọrụ ekele maka ya mma, kwadoo magburu onwe arụmọrụ. The buttons anya nnọọ sleek, ha na-n'ụzọ doro anya na aghụghọ haziri ha na-anaghị egbochi ndị playback. Wondershare Player Ibu dị iche iche sobtaitel faịlụ, dị ka SRT, ịnyịnya ibu na SSA. Nke a ọkpụkpọ àjà ọtụtụ atụmatụ maka nkezi ọrụ bụ free.
Km Player bụ a ọtụtụ ebe-ekele ngwá ọrụ na-ejere a dịgasị iche iche nso nke ọdịyo na video formats. Ọ nwere ya esịtidem codec, ọ bụ ike na-agba ọsọ na ala CPU kọmputa na ọ na-ruo eruo na a DirectShow merit usoro nke ahọrọ na prioritizes codecs gburugburu sistemụ. Km Player-enye gị ohere iji hazie ndepụta okwu site na a akara igbe kwe gị ka mmekọrịta na nke na-mmekọrịta sobtaitel faịlụ n'oge playback. Km Player bụ na-emeghe-isi iyi software.
3. Media Player Omuma Home Cinema
Media Player Omuma bụ na-emeghe-isi iyi usoro ihe omume na-akpọ ọdịyo na video faịlụ. Ọ bụ mmasị nke ndị ọrụ ekele a nnọọ mfe interface na-ahọrọ ihe dị mfe na-eji ngwa. N'adịghị ka Windows Media Player, onye ọ dabeere, ọ bụ pụtara mma na sụgharịa a dịgasị iche iche nke audio, video na oyiyi formats. Banyere ndepụta okwu, ndị ọhụrụ mbipute a ọkpụkpọ nachi sobtaitel renderer omume ikwu na anamorphic video, ọ na-ekere ndepụta okwu na isi iyi video mkpebi dị ka VSFilter na ọ na-enye ihe ọmụma aha maka mpụga ndepụta okwu ekele na VSFilter.
Bs Player a na-ewere site ọtụtụ ọrụ ndị kasị mma free media ọkpụkpọ na ụwa. Mbụ wepụtara na 2000, ọ dịla oke nke ọtụtụ nde ndị ọrụ n'ụwa nile. Ọ bụ maka free ma ọ bụ dị ka Pro version, nke na-efu 29,90 EUR. The free version bụ karịa na-eju afọ na ya abịa na a nnukwu ibu nke atụmatụ. The sobtaitel formats ọ na-akwado ndị MicroDVD, SubRip, SubViewer, MPL2, ịnyịnya ibu, SSA, SRT na VobSub. Bs Player na-akpaghị aka na-achọ ndepụta okwu online na ị na-ahọrọ otu ma ọ bụ karịa site na a window nyere site ọkpụkpọ.
VLC Player bụ a software ngwá ọrụ mepụtara a na-abụghị uru nzukọ dere ọrụ afọ ofufo, otú i nwere ike na-enwe ya ọtụtụ atụmatụ maka free. Ọ na-agba na niile arụ ọrụ usoro, ọ na-ekere kasị codecs-enweghị mkpa codec ngwugwu, na ọ rụrụ media akakabarede na gụgharia. Ndepụta okwu mkpa ka a nyeere site ọrụ na ha nwere ike mfe ịgbanwe.
A ọhụrụ Media Player, Kantaris bụ ugbu a na version 0.7.7 na ọ ka na-mma. O kwesịrị ekwesị ka beginners na ahụmahụ ọrụ dị ka nke ọma, na-adabere ọ bụla onye ọrụ mkpa ya. O nwere ọtụtụ ọrụ na mma anya mmetụta mgbe egwu na-akpọ ọdịyo faịlụ. Kantaris nwekwara okụt ndepụta okwu online na synchronizes ha ka ha na video faịlụ. A pụrụ iche mma bụ na ndepụta okwu agwa ngbanwe a kọwara otú odide na-egosipụta ụzọ ziri ezi.
GOM Media Player bụ a free ịba uru nke mmasị ntị si mmalite ya na nke mezuru enthusiasts '-atụ anya. Mgbe a ngwa ngwa na mfe wụnye usoro, ị ga-enwe ike ịnweta GOM si mara mma ma kensinammuo interface. Ọ bụ ezigbo playlist njikwa, ọ sụgharịa fọrọ nke nta niile formats, na onye ọ bụla version abịa na mma sobtaitel nkwado maka ezigbo ọrụ ahụmahụ.
Ihe ndị magburu onwe free media ọkpụkpọ maka Windows na Linux, SMPlayer na-gbaara dị ka 100% free nke spyware, adware na nje virus. Tụnyere ndị ọzọ yiri ngwa, ọ na-ekwe ka ị na-ele YouTube mkpachị kpọmkwem site isi window. Ọ na-onwem na niile atụmatụ nke a n'elu-notch oge a mgbasa ozi ọkpụkpọ - ọrụ enyi, na-eke na ijikwa listi ọkpụkpọ, nkwalite ngwá ọrụ na a sobtaitel Finder nke na-enyocha Internet ndepụta okwu data bases na ana achi achi a zuru okè nkiri na-ekiri n'abalị.
Kedu otu m ga, free, na mgbanwe - a bụ isi akụ nke Zoom Player. E nwere ihe fọrọ nke nta dịghị format ọ na-apụghị egwu (video, ọdịyo na oyiyi) na ọ dịghị onye ọrụ a na-apụghị aka ya. Mgbe ị na-ịgbanwee nke ọdịyo mode, ọkpụkpọ na-akpaghị aka na-enyo kwụsịrị preview mode otú ị Emela desktọpụ gị na ejibeghi ohere. Mbugharị Player nwere xySubFilter nkwado maka zuru ezu mkpebi sobtaitel ebre mgbe nsụgharị ala mkpebi videos, gbakwunyere na ị ga-enweta ọtụtụ sobtaitel customization nhọrọ.
Banshee bụ na-emeghe-isi iyi na ọ malitere dị ka a music ọkpụkpọ maka Linux. Ọ ghọrọ usoro na n'oge ọ na-arụ ma music na vidiyo, ọ ejiri pọdkastị na redio iyi. Ọ Mbubata media ngwa ngwa na Ọ na atụmatụ nkwado maka agbakwunyere na mpụga-faịlụ ndepụta okwu. Ọ na-emekarị na-abịa tupu-arụnyere na Ubuntu. Ọ bụ ihe karịrị a isi mgbasa ozi ọkpụkpọ; ọ bụkwa a media management usoro. Iji nchikota ya ngwa, Banshee bụkwa fechaa na mfe iji, manye ọnọdụ maka ihe ọ bụla oge a media ọkpụkpọ.
Olee Otú M Pụrụ Tinye ndepụta okwu ka My Videos 001
The Common DVD Drive Nsogbu
Olee otú dezie MOD Video Files
> Resource> Video> 10 Video Players na ike Embed na Play ndepụta okwu